Natiijooyinkii kulamada Champions League, Yaa la jiiday Yaa wax jiiday.? - Caasimada Online
Home Warar Natiijooyinkii kulamada Champions League, Yaa la jiiday Yaa wax jiiday.?
Natiijooyinkii kulamada Champions League, Yaa la jiiday Yaa wax jiiday.?
Champions League – Group E:
FC Nordsjaelland ayaa guul darro 4-0 ah kala kulantay kooxda koobka difaacaneysa ee Chelsea. Goolal ay kala dhaliyeen (33) Juan Mata (79) David Luiz (83) Juan Mata iyo (88) Ramires ayaa Blues u xaqiijiyey inay guul gaarto kulanka labaad ee wareega Guruubyada.
Juventus ayaa gurigeeda barbaro 1-1 ah kula dhaafi weysay kooxda Shakhtar Donetsk, waxaana goolka looga hormaray kooxda daafacanysa Serie A iyadoo uu kooxda martida ah u dhaliyey Teixeira daqiiqadii 23aad, balse Leonardo Bonucci ayaa ka daba keenay sedax daqiiqo ka dib sidaas ayeyna ciyaartu kusoo idlaatay.
Champions League – Group F:
BATE Borisov ayaa guul darro aan la saadaalineyn oo 3-1 ah dhabarka u saartay Bayern Munich, waxaana goolasha ku kala dhaliyey (23) . Pavlov (78) Rodionov Munich ayaana gool waxaa usoo celiyey (89) Ribéry, balse kama aysan soo kabsan goolka sedaxaad ee hurdada u diray waxaana ka dhaliyey (90) . Bressan.
Valencia ayaa 2-0 ku xaaqday kooxda ka socoto Faransiiska ee Lille, waxaana goolasha u dhaliyey (38) Jonas (75) Jonas. Iyadoo sedax daqiiqo ciyaarta ka dhiman tahay ayaa waxaa laga saaray daafaca dadabka midig ee dalka France Debuchy.
Champions League – Group G:
Spartak Moscow ayaa guul darro 3-2 ah gurigeeda waxaa ku sagootiyey kooxda ka socota dalka Scotland ee Celtic, (13) ayaa Hooper hugaanka u dhiibay kooxda dhowaan loo dalacay heerka sedaxaad ee Horyaalka Scotland. (41) Emenike ayaana u barbareeyey, sidaas ayaana lagu kala shah doontay.
Emenike ayaana hugaanka u dhiibay kooxda martida loo ahaa diiqadii (48), inta uusan Kombarov shabaqiisa kubad ku leexin aysana gool noqon, iyadoo weeraryahanka dalka Greece Samaras uu quusiyey kooxda martida loo ahaa daqiiqadii 90aad.
Barcelona ayaa 2-0 isaga reebtay Banfica oo ay marti ugu aheyd dalka Portugal, waxayna goolasha ka heshay (6) Alexes Sanchez (55) Cesc Fabregas, waxaana ciyaarta dhaawac uga baxay Carles Poyol oo laga yaabo inuusan ciyaarin kulanka sabtida ay Barcelona Comp Nou ku wajaheyso kooxda ay xafiiltamaan ee Real Madrid.
Champions League – Group H:
Manchester United ayaa 2-1 ku dubtay kooxda tababarta daran ee CFR Cluj, gool ayaase looga naxsaday daqiiqadii (14) kaasoo uu ka dhaliyey Kapetanos, balse Roben van Persie ayaa meel uga soo baxay isagoo quusiyey kooxda martida loo ahaa daqiiqadihii (29) iyo (49).
Galatasaray ayaa dalka Turkiga ku qaabishay kooxda Braga, waxaana dhabarka loo saaray guul darro 2-0 ah, iyadoo ay goolasha ka dhaliyeen ciyaaryahanada Micael iyo Alan daqiiqadihii (27) iyo 90aad.